Chitoro cheWiricheya chine Zvitoro zvemuno | Karmanhealthcare.com
Tsvaga Vatengesi Vemuno
Kuti uwane mupi wekutengesa munzvimbo yako, ndapota isa zip code yako mubhokisi remavara pamusoro pemepu kuti utsvage kune vatengesi vemunharaunda yako. Tine vatengesi vanopfuura zviuru zvitanhatu munyika yose vakagadzirira kukubatsira iwe chero mibvunzo yaungave unayo nezve zvigadzirwa zvedu. Vatengesi vakanyorwa mumhedzisiro yekutsvaga izvozvi vane zvigadzirwa zvedu mudura *, kana vane kugona kuodha chigadzirwa kubva kwatiri nyore kwazvo. Kana iwe usingakwanise kuwana mutengesi kuburikidza neyedu zip kodhi locator, ndokumbira utipe runhare pa1-626-581-2235, apo mumwe wevatinoshamwaridzana nevatengi vanobatsirana newe achakubatsira iwe kutsvaga mutengesi munzvimbo yako yemunharaunda. Ndokumbirawo muve nechokwadi chekuti munotaura chaiwo mamodheru (e) echigadzirwa chauri kutsvaga uye isu tichaedza kutsvaga mutengesi ari padyo newe. Karman Healthcare inotora kudada kukuru nebasa redu uye vatengesi vanobatirana vanonyatso chengetedza chigadzirwa chedu. * Vamwe vatengesi vakanyorwa mumhedzisiro yekutsvaga vanogona kunge vasina chigadzirwa chedu mudura, asi vanogona kutifonera nekuraira zvakananga.
Wiricheya Kutenga: Ungatenga Sei maWheelchair
Kutenga pamhepo kune Vashandisi veWiricheya
Chitoro chewiricheya Pedyo newe
Kutsvaga chitoro chemuno chingave chimwe chezvinhu zvakaoma kuita. Uyezve, ungangoda kutenga uye kuona chigadzirwa usati watenga.
Nekuda kweizvozvo, ndosaka isu tashanda nesimba kusimudzira mutengesi wakakura kudunhu rese ane hunyanzvi mune zvavanoita.
Isu tinoedza kuchengeta rondedzero yacho kuti iwedzerwe sezvinobvira. Iwe kudana kana vatengesi vedu kugovera ruzivo rwechizvino kunotibatsira neiri basa
Kutsigira nharaunda yemuno uye yavo wiricheya chitoro
Haasi zvitoro zvese zvinotengesa kana zvinoshanda mukati wiricheya. Vamwe vanoita zveDME kana mamwe marudzi ezvigadzirwa zvekurapa.
Moreoever, vamwe vanogonesa muRehabilitative Dhiza uye zvimwe zvinongova chimwe chikamu chevazhinji zvigadzirwa zvekutengesa zvinotengesa. Usakanganwa kufona ndeye kana iwe uchida rubatsiro. Tinogona kusvikwa pa 1-626-581-2235.
Zvimwe zvezvitoro zvemawiricheya zvinorojawo mawiricheya zvakare
Rent Medical Equipment pedyo neSouthern California. Sherman Oaks Medical yanga ichishandira nharaunda yedu kubva 1997. Isu tinopa yakachena & yakacheneswa Kurenda kwemidziyo yekurapa kune yako yenguva pfupi kana yenguva refu yezvokushandisa zvekurapa zvaunoda. Vatengi vanogamuchirwa kumira pedyo nehombe yeMedical Supply showroom/chitoro chiri muLos Angeles California, muguta reSherman Oaks. Vashandi vedu vane ruzivo vanokubatsira pakusarudza michina yekurapa yakakodzera seManuwari Mawiricheya yeRent, Simba Mawiricheya yeRent, wiricheya Ramp yeRendi, Simudza Chairs yeRent, Specialty Vanofamba yeRendi, Mabhedha eZvipatara eRendi nemamwe marudzi ezvokurapa uye zvekurapa zveRent. Isu tinopawo kuendesa uye kumisikidza-kumusoro yezvatinoroja kune yakakura uye yakapoterera Los Angeles Area. Isu tinoendesa kudzimba, dzimba, uye mahotera kune chero zvigadzirwa zvekuhaya zvido. Nzvimbo dzedu dzekuendesa dzinosanganisira: Universal Studios, Iyo Getty Center, Downtown Los Angeles, nemaguta ese akapoterera akatenderedza Los Angeles. Kune vatengi vanobvunza nezvedu nzvimbo dzekuendesa ndapota taura nesu kana scroll pasi kune yedu nzvimbo yenzvimbo runyorwa.